Andraikitra eo anivon’ny FJKM: hiatrika ny taon-jobily faha-30 ny Pdt Rivo | NewsMada
Andraikitra eo anivon’ny FJKM: hiatrika ny taon-jobily faha-30 ny Pdt Rivo
Par Taratra sur 27/02/2021
Adidy niantsorohany : birao mpiandraikitra S.a.mi.a, filohan’ny Sekoly alahady, filohan’ny Firaisan’ny sampana Fisava, mpihevi-draharaha Sekoly alahady, sns. Hanamarika izany rehetra izany i Prezidà Rivo.
Andrianalimanana Ri­von­jato, antsoin’ny olona maro amin’ny solon’ anarana « Prezidà Rivo ». Taona 1991, nandray andraikitra teo amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasi­kara fitandremana Ambodi­hady Vaovao Ambohimana­rina.
Raha ny fantatra, hanka­laza sy hisaotra an’Andria­ma­nitra noho izany taon-jobily faha-30 izany izy mandritra ity taona 2021 ity. Efa tafajoro, ny 22 novambra 2019 rahateo ny komity hikarakara izany. Araka ny nambaran-dRave­lomanantsoa Faramalala filohan’io komity io, hisokatra rahampitso alahady 28 fe­broary izany taom-pankala­zana izany. Hitondra ny tenin’ Andriamanitra ny filohan’ny FJKM, ny Dr. Irako Andria­ma­­ha­zosoa Ammi mpitan­drina. Ny hariva kosa no hanatanterahana ny seho hira fiderana hiarahana amin’ny S.a.mi.a sy Domoina ary ny antoko mpihira Hosana Ambohijatovo Fitiavana. Ny asabotsy 17 jolay, ivo sady hiarahana amin’ ireo Sekoly alahady eo amin’ ny synodam-paritany Antana­narivo Andrefana. Ny 21 no­vambra 2021, famaranana taon-jobily.
Teny faneva entin’i Pre­zidà Rivo mankalaza ity taon-jaobily faha-30 ity ny hoe :
« Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao… ary manana fahare­tana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Fan­tatro ny asanao fa ma­nana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako » (Apo2,2a-3 sy 3,8).